Hla Min (Lifelong Learner) – Page 297 – HlaMin
Golden Jubilee Golf Tournament
​ The tournament is organized by Ko Khin Maung Lwin (Kyet Taw, 87/91) and team. About 200 alums — from the Class of 1967 to 2000 — will participate in the RIT Golden Jubilee Tournament and/or Dinner following the event. Souvenirs will be given to the 170+ participants. […]
Class of 2000 in 2014
PZP By the Class of 2000 in December 2014
Rangoon University Boat Club (1948 – 49) Photo : collections of “History of University Engineering Education in Burma/Myanmar” Provided by Sayagyi U Tin U (C, RUBC Captain & Gold) and Sayagyi U Ba Than (M)
Saya U Moe Aung wrote : စွယ်တော်ရိပ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်သည်ထက် အောင်မြင်နေရခြင်းမှာ စက်မှုတက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် များမှ ဘွဲ့ရ အင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ တို့၏ ငွေကြေးလှူဒါန်းပံ့ပိုးမှု၊ ကူညီအားပေးမှု၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အားလုံး၏ ကိုယ်ကျိုးမဲ့ စွမ်းဆောင်မှု စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။အားလုံး၏ ကိုယ်ကျိုးမဲ့ စွမ်းဆောင်မှု စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ [ ဆက်လက်၍ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြပါရန် ဆော်သြအပ်ပါသည် ] Editor’s Notes : As Saya often mentioned, there […]
For archive (Updated on February 1, 2019) by U Myint Pe (M 72) နှစ်ပါတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပြခန်းများမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြတဲ့ MES YE များ (YGN, MDY, TGY ) အတွက် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲလေးကို 15-1-2013 မှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုကြ၊ ကကြ၊ပျော်ကြပြီး ပွဲသိမ်းတော့ဆရာများကို YE များက ကန်တော့ ကြပါတယ်။ ဆရာများကလဲ ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီးရထားတဲ့ ဆုံးမစကားလက်ဆောင်ပေးကြတယ်။ ဆရာကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်) က၊ မိဘကိုရိုသေစွာလုပ်ကြွေးပြုစုသူဟာ တသက်တာ ဆင်းရဲဒုက္ခ […]
Dr. Taing Ok (ChE69) Dr. Myo Khin (C70) & Daw Winsome (C73) Daw Thin Thin Naing (Burmese dept 1970-78) Ma than aye (1975-met) Ma khin hnin yi (1976-ch) Ma aye aye swe (1996-mech) Ma moe thi da htwe (1994-mech) Ma khin myint (1982-arch) Ma sein sein (1975-ch) Ma […]
Class reunions and “Home coming” celebrations take place at the alma mater, but for almost four decades large-scale Acariya Puzaw Pwes, Saya Ga Dawt Pwes, and Saya Pu Zaw Pwes (which allow non-Buddhist alums to sponsor and participate) were absent at the BIT/RIT/YIT/YTU campus in Gyogone. But, the […]
by U Ohn Khine (M70) The grand event SPZP-2012 had been successfully held on the 30th December 2012, at the open space grass lawn between the two wings of the main building of RIT. This was the place where convocations were held up till 1970 batch graduation. What […]
‹ Newer 1 … 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Older ›